Home Wararka MW Dano oo magalada qardho kula kulmay Ururada dhalinyarada & haweenka
MW Dano oo magalada qardho kula kulmay Ururada dhalinyarada & haweenka
Madaxweynaha Dowladd goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, oo ku sugan magaalada Qardho ayaa weli kulamo looga hadlay amniga, horumarinta dhaqaalaha iyo arrimo kale ka wada magaaladaasi.
Saciid Deni ayaa xalay Madaxtooyada Qardho waxaa uu ku qaabilay Haweenka iyo Dhallinyarada Gobolka Bari.
Haweenka iyo Dhallinyarada Gobolka Bari ayaa Madaxweynaha uga mahadceliyay waxqabadka maamulka sida dib-u-dhiska Ciidamada, Hirgelinta Dimuqraadiyadda, Tashiilka Maaliyadda, Kaabayaasha dhaqaalaha, xarumaha arrimaha bulshada iyo sida dowladdu door muhim ah Haweenka iyo Dhallinyarada uga siisay hoggaaminta iyo metelaada Dowladda Puntland.
Madaxweyne Deni ayaa haweenka iyo dhalinyarada u soo jeediyay in ay ka shaqeeyaan horumarinta deegaanka isla markaana maamulka ay garab ku siiyaan wax ka qabashada baahiyaha Bulshada.
Madaxweynaha Puntand intii uu ku sugnaa Qardho waxaa uu tababar u soo xiray ciidamo Boolis ah.